काठमाडौं १२ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला बैंकहरूलाई मर्जरको लागि दबाब सिर्जना गर्ने भएको छ। केही दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा गभर्नर डा, चिरञ्जीवी नेपालले बैंकहरूलाई मौद्रिक नीति आउनभन्दा अगाडि मर्जर हुने संस्थासँग लभ गर्नको लागि आग्रह गरेका थिए।
गभर्नर नेपालले बिहीबार पुनस् २८ बैंकका अध्यक्ष र सिइओलाई बोलाएर पार्टनर खोज्नको लागि आग्रह गरेका हुन्। छलफलमा गभर्नर नेपालले अहिलेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्न मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए। राष्ट्र बैंकले अबको एक साताभित्र कुन संस्थासँग मर्ज गर्ने हो त्यसको विषयमा जानकारी गराउनको लागि समेत आग्रह गरेको छ।
खराब कर्जा बढ्न थालेको, सिसिडी पालना नभएको, स्प्रेड दर कायम नगरेको जस्ता समस्या बैंकमा देखिन थालेका छन्। यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पुँजी वृद्धि गर्ने योजना अघि सार्दा सरकार र राष्ट्र बैंकको समेत दूरी बढेको थियो। वर्तमान अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले समेत पुँजी वृद्धि योजनाले नकारात्मक प्रभाव पारेको टिप्पणी गरको थिए।
अहिले सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले मर्जरलाई प्राथमिकता दिएका छन्। राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि नै पुँजी वृद्धिको योजना अघि सारे पनि वाणिज्य बैंकको संख्या घट्न नसकेपछि मर्जरको लागि दबाब दिन थालेको हो। असार अन्तिममा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने नेपाल राष्ट्र बैंकको तयारी छ।
एसइई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, कुन जीपीएमा कति पास भए ? रिजल्ट हेर्न यसो गर्नुहोस
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर तीन जीपीएसहित एसइई उत्तीर्ण, नेकपा सांसद शान्ता चौधरीले ल्याइन् ग्रेड ‘बी
थाहै नपाइ २३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विदेशबाट सन्तोष नेपालको आफ्नो खातामा आएपछि …..
May 1, 2019 अखवार अनलाइन
हतियार किनेको मात्र भारतलाई सवा तीन अर्व !
प्रभु बैँकले १० प्रतिशत लाभांश सेयर दिने
गैंडाकोटमा ग्लोबल आइएमई बैंकको शाखा विस्तार
एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले हकप्रद निष्काशनको लागि बुक क्लोज मिति तय